Ego - Motadata
Maka Ndị otu ego
Megharịa njikwa arịrịọ ego
Hazie usoro ego kwa ụbọchị iji kwalite yana kwalite arụmọrụ arụmọrụ
Ihe ịma aka nke Ndị otu ego
Teknụzụ na data na-achị ụlọ ọrụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ngwa dị iche iche, njikọta na usoro. Ojiji nke sistemu ndị gbajiri agbaji dị otú ahụ na ngalaba nke ọ bụla na-arụpụta na mmefu na mgbakasị ọrụ dị elu. Iji gbakwunye na nke ahụ, maka otu ndị na-ahụ maka ego, ijikwa ihe ize ndụ, na ọchịchị mgbe ị na-ahụ maka nchekwa na nnabata abụghị ọrụ dị mfe. Yabụ, ndị otu kwesịrị imelite usoro njikwa ọrụ ha iji hụ na nnyefe ọrụ ka mma yana chekwaa ọnụ ahịa.
nke Ndị otu ego
ebelatala ọnụọgụ nke akwụkwọ arịrịọ ụtụ isi na-abata site na 90%.
Motadata ServiceOps na-enye ohere ka ndị otu guzobe usoro ebe enyere ndị ọrụ ikike inyere onwe ha aka.
Ngwọta Motadata ServiceOps maka Ndị otu ego
Gbaa mbọ hụ na a na-enyefe ọrụ ego echekwara yana a ga-enyocha ya na Motadata ServiceOps n'ofe nzukọ a
Mepụta ma megharịa njikwa arịrịọ ego ego
Mepụta katalọgụ ọrụ ego iji mebie njikwa arịrịọ. Na-ekenye ndị ọrụ kwesịrị ekwesị arịrịọ mbata na akpaghị aka site na iji njirimara ekenye tiketi smart AI na-enyere aka.
Hazie ozi site na imepụta na ibipụta FAQ gbasara ụtụ isi, ụgwọ ọnwa, na ajụjụ ndị ọzọ a na-ajụkarị na ntọala ihe ọmụma wee mee ka ọ dị na etiti iji zere ajụjụ ugboro ugboro.
Mee ka ndị ọrụ na-emelite mgbe niile site na ịgbasa ọkwa dị oke mkpa.
Melite afọ ojuju ndị ahịa na ndị ọrụ site n'inye mkpebi ngwa ngwa
Mejuputa onye nnọchi anya mebere ka itinye aka na arịrịọ ndị a na-ahụkarị dị ka arịrịọ Weghachite IT wee nye mkpebi ozugbo.
Megharịa ọrụ ugboro ugboro na usoro nnabata site na iji usoro ọrụ ọtụtụ ọkwa ka otu ahụ nwee ike ịzaghachi ma dozie arịrịọ ngwa ngwa na nke ọma.
Gbaa mbọ hụ na ịdị njikere nyocha, oge ọ bụla
Debe ndekọ emelitere nke arịrịọ metụtara ego ma megharịa na mebie usoro ego dị mkpa dị ka nkwenye iji kwe nkwa ịdị njikere nyocha.
Gbaa mbọ hụ na nnabata mgbe ị na-eji ngwa ndị ọzọ maka ndekọ ego na ego yana njirimara njikwa ikike ngwanrọ nke modul njikwa akụrụngwa IT.
Chekwaa adịghị ike nchekwa site na iji njikwa patch na-akpaghị aka na-akpachichi ngwaọrụ niile mgbe niile. Nyochaa nnabata ma mee ka usoro nyocha ghara inwe nchekasị site na iji dashboards na-enye nghọta na KPI nnyefe ọrụ.
Uru maka Ndị otu ego
Gbaa mbọ hụ na nchekwa na nnabata wee chekwaa ụgwọ ọrụ na Motadata ServiceOps
Kọwaa ma mejuputa ohere dabere na ọrụ na data ego na akwụkwọ niile site na iji ntọala ohere.
Mfe nke Mmejuputa
Bulite ikpo okwu ITSM ma na-agba ọsọ n'ime nkeji na-enweghị koodu achọrọ. Ndozi efu, enweghị oge nkwụsị, yana ọzụzụ pere mpe.
Ihe owuwu mepere emepe Motadata ServiceOps na-eme ka njikọta dị mfe na ngwa ego ndị ọzọ na-eji REST API.